ခိုင်ညီလင်း(နည်းပညာ): ဘယ်နိုင်ငံက မေးလ်ပို့တာလဲ ?
ဘယ်နိုင်ငံက မေးလ်ပို့တာလဲ ?
အခုနည်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မိမိကို မေးလ်ပို့တဲ့သူက ဘယ်က ပို့တာလည်ဆိုတာကို Time Zone နဲ့ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ မခတ်ခဲတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကို ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ Chat Mail တွေ Auto Reply မေးလ်တွေတော့ ကြည့်လို့မရပါဘူး။ မေးလ်ပို့မှသာ ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Auto Reply ကို Time Zone က
-7 ပြနေပါမည်။ -7 Time Zone က အမေရိကန် Time Zone ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိက မေးလ်မှာ Auto Reply လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်သူ မေးလ်ပို့ပို့ Auto mail က Reply လုပ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က ပို့တဲ့ မေးလ်ဆို ( GMT +6:30) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဥပမာ ပြောပြတာပါ။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
1. မိမိ Mail ကို Sign In လုပ်လိုက်ပါ။
2. Setting ကို click လိုက်ပါ။ (မိမိ Mail Box ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာ ရှိပါတယ်။)
3. Labs ကို ထပ် click လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။ Sender Time Zone ကို Enable ပေးလိုက်ပါ။ ပြီရင် အောက်နားမှ Save Changes ကို click လိုက်ပါ။
4. အထပ်ပါအတိုင်းSettings မှာ ပြင်ပြီတာနဲ့ မိမိဆီကို သူငယ်ချင်းက မေးလ်ပို့တာနဲ့ Show Detail ကိုနိုပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း Time Zone ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မိမိက Time Zone တွေနဲ့ နိုင်ငံတွေ မတွဲမိရင် နံပတ် (၅)မှာ တင်ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ Time Zone ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် ဥပမာ ပြတာ ကတော့ GMT + 6:30 ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းက မေးလ်ပို့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နိုင်ငံ (၄)နိုင်ငံကို စမ်းထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမှန်ပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ အသေစိတ်ကိုတော့ မသိနိုင်ပါ။ နိုင်ငံကိုသာ သိနိုင်ပါတယ်။
5. Time Zone တွေကို မသိရင် အောက်က ဆိုဒ်နှစ်ခုမှာ ရှာဖွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Andriod ဖုန်းတွေအတွက် Game နဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးတွေအတွက် Free download ရတဲ့ နေရာတွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေး လိုက်တယ် ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လု...
Internet download manager ( Install လုပ်နည်း ) နဲ့( Full version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း )
Internet download manager အခုမှစပြီး install မယ့်သူများအတွက် ကတော့ လွယ်ပါတယ် Internet download manager ကိုလက်ရှိ သုံးပြုနေပြီး k...
အခမဲ့ message ပို့မယ်......
အရေးပေါ် E-mail သတင်း။
Gmail တွင် ပို့ပြီးသား Mail ပြန်ဖျက်ချင်ရင်....
Gtalk မှသူငယ်ချင်းကိုသေခန်းပြတ် Block လုပ်နည်း
Gtalk နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ဖို...
Windows အသုံးဝင် shortcut keys များ...
Internet Explorer Shortcuts များ...
keyboard shortcuts များ....
Printer များ အကြောင်း အပြည့်အစုံ
youtube ထဲမှာ MP4ကို MP3ပြောင်းနည်း
Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြား...
Gtalk က offline chat (သူခိုးချက်)တွေကို ဖမ်းပုံဖမ်...
Gtalk ရုပ်ကလောင်လေးတွေနဲ့ chat ချင်ရင်
NOKIA SECRET CODES ကုတ်များ
Gtalk က တဆင့် ပါဠိ- မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် အလွယ်...
၂၄ ဘာသာပြန် မြန်မာ web site
Apple က app တွေကို Free Download ချနည်း
မလိုတဲ့ EMAILS တွေကို ကိုယ့်ဆီ လုံးဝ ဆက်သွယ်လို့မရ...
gtalk ဖုန်းပြောတာ ဒီကပြောတာမကြားရဘူး ဟိုကပြောတာကြာ...
ဖောင့်ချိန်းတဲ့ ကီးဘုတ်လေး ပျောက်နေခဲ့ရင်
မိမိ password ကောင်း မကောင်းစမ်းနည်း
facebook က သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ email ကို သိချင်ရင်..